Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Sheekh Adan Madoobe oo Maanta sheegay in uu yahay Musharax xilka Gudoomiyaha Barlamanka Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Sheekh Adan Madoobe oo Maanta sheegay in uu yahay Musharax xilka Gudoomiyaha Barlamanka
By Rashka – 17th April 2018
Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) oo horey u soo noqday Guddoomiyaha Baarlamaanka hadana ah Mudane ka tirsan Baarlamaanka Golaha Shacabka ayaa maanta oo ay Taariikhdu tahay 17-04-18 ku dhawaaqay inuu yahay Musharax u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Guddoomiyihii Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa 8-dii bishan April iska casilay xilka Guddoonka, sida xeerka Baarlamaanka uu dhigayana ay waajib tahay in booskaas lagu buuxiyo mudo 15 maalmood ah.
Aadan Madoobe oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay inuu soo shaqeeyay iyada oo aysan jirin dhaqaale iyo Miisaaniyad ay Dowladda ku shaqeyso, iyada oo xilligaasi la raadinayay in la helo Dowlad guuleysata.
Wuxuu sheegay markii uu is casilay Madaxweynihii Soomaaliya Marxuum C/laahi Yuusuf inuu ku guuleystay inuu isku keeno Dowladda Federaalka iyo Midowgii Maxaakiimta oo xilligaasi ahaa Mucaarad, intaasi kadibna la soo doortay Madaxweyne cusub.
Baarlamaanka Federaalka ayuu ka dalbaday in ay codkooda siiyaan si uu ugu guuleysto xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo uu sheegay inuu leeyahay khibradeeda, kana soo bixi karo waajibaadka saaran, maadaama hada ay jirto Dowlad leh Hay’adaheeda Dastuuriga ah.
“Waxaan rabaa inaan maanta halkan ka cadeeyo inaan u taagannahay xilka Gudoomiyaha Golaha Shacabka, dalka waxaan ka soo qabtay xilal kala duwan, iyada oo aan mar soo noqday Gudoomiyaha Baarlamaanka, waqti badan ayaan u soo shaqeeyay shacabka, Mudanayaasha Baarlamaanka waxaan ka dalbanayaa in ay codkooda igu taageeraan.” Ayuu yiri Aadan Madoobe.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa Guddoomiye Baarlamaan soo noqday intii u dhaxeysay 2007-dii ilaa 2010-kii, sidoo kale wuxuu soo noqday Ra’iisul Wasaare kuxigeen, Wasiir iyo Baarlamaano kala duwan oo uu xildhibaan uu ka soo noqday.
Dadku dhaw dhaw Adan madoobe aya zheegay in Aadan madoobe uusan kalsooni ka haysan Madaxtooyada isagoo sidoo kale beryihii ugu dambeeyaay isku dhaceen Sharif xasan Taasoo dhib ku ah Ololihiisa Damaca Gudoomiye nimada
Cabdiwali Gaas Oo sheegay in Lacagti Imaraadka Lagu qabtay Garoonka Qarkeed Ay Puntland u Socotay
Dawlada Qadar oo Gawaari Basas Ah ugu Deeqday Maamulka Gobolak Banaadir